Daawo sawiro:Qaraxii ka dhacay Muqdisho? - BAARGAAL.NET
deg deg degdeg muqdisho qarax
Daawo sawiro:Qaraxii ka dhacay Muqdisho?
✔ Admin on January 04, 2015
Warar Hor dhac ah oo laga Helaayo Qaraxii maanta Ka Dhacay Magaalada Muqdisho ayaa waxa alagu soo waramayaa in ay ku Geeriyoodeen 5 Qof oo rayid ah Waxaana Ku Dahaawacmay 15 kale Sida uu Ku soo waramayaan wariyaalhalkaasi Gaaray.
Goobta Qaraxa ka Dhacay ayaa ah Agagaarka Xerada Afisyooni ee Magalaada Muqdisho Waxaana lala Beegsaday Gawaari ciidamada Gaashaan Ay leeyihiin oo goobtaasi Marayay Sida ay Goob Joogayaal u Xaqiijiyeen Warbaahinta Widh Widh Online.
Afhayeenka Ciidamada Amniga Maxmed yuusuf oo Saxaafada Kula Hadlay Goobta Wax Ka dhaceen ayaa Sheegay in uu Goobtaasi ku qarxay Gaari ay Ceersanayeen ciidamada amaanka kaasoo is qarxiyay kadib markii uu ogaaday in uusan baxsaneeyn waa sida uu hadalka u dhigay maxamed yuusufe.
Lama oga qasaaraha ka soo gaaray Ciidamadii lala Beegsaday kamana hadlin Afhayeenku in Ciidamo Wax soo gareen